Kooxda NCS Sheffield - Element Society iyo Kooxda Wakiilada
Kooxda Element Society ee Shaqaalaha
Shaqaalaheennu waxay ku wada jiraan aragtidooda, mabaadii'dooda iyo go'aamadooda aan la isku halayn karin si ay dhalinyarada ugu suurtageliyaan inay sameeyaan fursadaha ugu badan ee iyaga u furan. Laga soo bilaabo waqtigayaga shaqeeyayaasha ah ee naga dhaxeeya guddiga, waxaan wadaagnaa aragti isku mid ah iyo faham.
Laakiin ... Waxyaabo badan ayaanu sameynaa. Inkasta oo aragtieena la wadaago uu yahay qodobka ugu muhiimsan ee nala midoobi kara, waxa kale oo laga yaabaa inay tahay arrin keliya.
Waxaan sidoo kale aqoonsanahay in hibada ay ka timaaddo dhammaanba qaybaha iyo qaybaha iyo waxaan aaminsanahay in koox dhab ah oo kala duwan ay naga caawineyso inaanu bixino adeega runta ah ee kala duwan.
Maamulaha / Sarkaalka Dhismaha
Iskuduwaha Ku-Xigeenka NCS